Shir qurbajoogta Puntland ee Australia & Gurmadka Abaaraha Puntland. – Radio Daljir
Shir qurbajoogta Puntland ee Australia & Gurmadka Abaaraha Puntland.
Melbourne, Mar 07 – Maalintii Axada ee bisha Maarso ahayd 6da 2011 waxaa lagu qabtay xarunta Flemington Community Centre ee magaalada Melbourne Shir ay isugu yimaadeen dad ka socda Jaalliyada Qurbajoogta ee reer Puntland ee wadanka Australia, kuwaas oo kulankoodu ku salaysnaa sidii taageero dhaqaale loo gaarsiin lahaa dadka abaaruhu saameeyeen ee ku nool Puntland.
Waxaa kaloo xusid mudan in shirka qabanqaabidiisa uu qayb weyn ka qaatey Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Jaamac Osman (RAAS).
Saciid Shiinle oo ahaa xiriiriyaha barnaamijka ayaa goobta shirku ka socday ku soo dhoweeyey ka qaybgalayaasha wuxuuna mikrifoonka ku soo dhoweeyey Sheikh Cabdiwaaxid Hassan oo halkaas aayada Quraana ka akhriyey. Intaas ka dib waxaa hadalka lagu soo dhoweeyey Guddoomiyaha Australian Puntland Diaspora Cumar Moxamud Dhollawaa oo ka waramay guud ahaan xaallada abaarta iyo xaallada siyaasadeed ee mandiqada Puntland. Intaas ka dib waxaa hadalka qaatay Cabdiraxmaan Jamac Osman oo ah Guddoomiyaha Somali Community in Victoria oo halkaas ka soo jeediyey hadala guubaabo iyo dhiirigelin ah.
Waxaa isaguna halkaas aragtida diintu ka qabto sadaqada ka soo jeediyey Aadan Cali oo ka waramay ajarka iyo xasanaadka illaahay umadiisa ka siiyo sadaqada loona baahan yahay mar walba in lagu niyadsamaado waxa loola niyooday lagana fogaado wixii shaki keenaya.
Waxaa iyaguna hadalla gaaban halkaas ka soo jeediyey Khadiija Cali Muse iyo Umul Khayr Dalmar oo ka hadlay sida loogu baahan yahay in la iskaashado.
Intii shirku socday waxaa hadalo kaftan dhab leh dadku ku maaweelinayey Saciid Shiinle oo barnaamijka daadihinaayey.
Waxaa xusid mudan in Xaawo Dheel iyo koox la shaqaynaysa ay dadka shirka ka soo qaybgalay ku saagootiyeen casho sharaf ay u soo diyaariyeen ka qaybgalayaasha.
Shirwac M. Jama